Deezer Music Player: Songs, Playlists & Podcasts 6.1.10.19 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.1.10.19 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ဂီတ & အသံ Deezer Music Player: Songs, Playlists & Podcasts
Deezer Music Player: Songs, Playlists & Podcasts ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင်၏အသက်တာသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တေးသံထိုက်တန်ပါတယ်။ သင့်ကိုအစဉ်သင်နှစ်သက်သောသီချင်းများပေးခြင်း, သင်သင်၏နောက်အကြိုက်ဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိကူညီပေးနေ - 56 သန်းအပုဒ်ပေါင်းရုံသင်တို့အဘို့ကိုယ်ပိုင်အကြံပြုချက်များနှင့်အတူ, Deezer သင့်ရဲ့ဂီတအဖော်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကစိတ်အားထက်သန်မှုကိုဆောင် ခဲ့. , ငါတို့ဂီတဆောင်ခဲ့ရမည်။
Deezer နှင့်အတူအကောင်းဆုံး-In-class ကို features တွေပျော်မွေ့:
လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ hits နှင့်အတူ•ဂီတ streaming များ
ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်နားထောင်ရန်• 56 သန်းပုဒ်
•နောက်ကျောမှီမွှေနှောက် Mode ကိုနှင့်အတူသစ်ကိုအပုဒ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ
•စိတ်ကြိုက်အကြံပြုချက်များကိုရယူပါနှင့် Flow နှင့်အတူဂီတကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ
• Discover podcasts တွေကိုရေဒီယိုစခန်းများနှင့်အော်ဒီယိုချန်နယ်
ပိုပြီးလုပ်ချင်ပါသလား Deezer ပရီမီယံနှင့်အတူအဆမဲ့ Go:
•အော့ဖ်လိုင်းဖြင့် Mode ကို: သင်၏အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများ download လုပ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူတို့ကိုနားထောင်ရန်
• Unlimited ခုန်ကျော်ခြင်းများ
• Superior အသံအရည်အသွေး (320 kbps)
•အမေဇုံ Alexa နှင့်ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေ compatibility
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကို Flow ကိုပြောပြပါသည်သင်တို့အားလမ်းတစ်လျှောက်သစ်ကိုအပုဒ်များနှင့်အနုပညာရှင်များကရှာဖွေတွေ့ရှိကူညီပေးနေ, သင့်အရသာအပေါ်အခြေခံပြီးသင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံရောနှောဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကစားနှိပ်, အပေါငျးတို့သငျသညျကိုခစျြသီချင်းများနှင့်အတူ non-ရပ်တန့်ရောနှောပျော်မွေ့ - ပေါင်းသင်၏နောက်အကြိုက်ဆုံး။
လိုက်ဖက်တဲ့ devices များ
သင့်ရဲ့ချိတ်ဆက် devices များနှင့်အတူ Deezer ခံစားနှင့် Apple Watch က Google ကနေအိမ်, အမေဇုံ Alexa နှင့် Sonos သံကိုစနစ်များပေါ်တွင်သင်၏အကြိုက်ဆုံးတီးလုံးကိုနားထောင်။
6 Deezer ပရီမီယံသင်တို့အဘို့ပရိုဖိုင်း (နှင့်သင့်ကလေးတွေ)
ဝက်စျေးနှုန်း Deezer ပရီမီယံအားလုံးသည်အကျိုးကျေးဇူးများ
Deezer မင်္ဂလာပါ-Fi ကို:
High-res သံကိုစနစ်များအပေါ် Lossless အရည်အသွေး stream ဂီတ
Deezer Music Player: Songs, Playlists & Podcasts အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Deezer Music Player: Songs, Playlists & Podcasts အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Deezer Music Player: Songs, Playlists & Podcasts အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Deezer Music Player: Songs, Playlists & Podcasts အား အခ်က္ျပပါ
appsonfree စတိုး 6.5k 971.24k
Deezer Music Player: Songs, Playlists & Podcasts ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Deezer Music Player: Songs, Playlists & Podcasts အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 6.1.10.19
ထုတ်လုပ်သူ Deezer Mobile
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.deezer.com/legal/personal-datas.php
App Name: Deezer Music Player: Songs, Playlists & Podcasts
File Size: 32.01MB
Release date: 2019-09-06 20:36:28
လက်မှတ် SHA1: 5D:E8:EB:40:98:D2:E3:5A:2C:39:51:A1:69:BF:9E:19:A6:80:E2:D4
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Deezer.com
အဖွဲ့အစည်း (O): Deezer.com
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Paris
Deezer Music Player: Songs, Playlists & Podcasts APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ